Moringa Exporter & Private Label Moringa Manufacture : Iwe Unoda Kugadzira Yako Moringa Chigadzirwa? - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / Moringa Exporter & Private Label Moringa Manufacture : Iwe Unoda Kugadzira Yako Moringa Chigadzirwa?
Moringa Exporter & Private Label Moringa Manufacture : Iwe Unoda Kugadzira Yako Moringa Chigadzirwa?
Iwe Unoda Kugadzira Yako Moringa Chigadzirwa?
Nhau dzakanaka! Tinogona kugadzira moringa yakapera zvigadzirwa tichishandisa yako wega brand / yakavanzika label moringa / chena label zvigadzirwa zveMoringa Oleifera
Siira maitiro ese ekugadzira kwatiri, iwe unongogamuchira yekupedzisira yakapedzwa zvinhu zvakapetwa pasi pemhando yako.
Yakanyatsokodzera makambani eB2C, masupamaketi, mahotera & macafe, varidzi vezvitoro zvekudyira, makambani ekutengesa, nezvimwe. Ndokumbira utibate kuburikidza newhatsapp nhamba +62-877-5801-6000
Ccmpany yedu inotungamira Mugadziri, Mutengesi uye Mutengesi weOrganic Moringa shizha hupfu, mhodzi dzeMoringa nemafuta eMoringa.
Isu tiri kambani yakabatanidzwa yeMoringa inobata nekutonga mapurazi eMoringa kugadzira kukosha kwakawedzera Moringa mhando yezvigadzirwa.
Isu tinotumira kunze Organic Moringa shizha hupfu kune dzinopfuura nyika makumi maviri pasirese.
Mazhinji eanotungamira mabhureki ezve nutraceutical anga achishandisa Yedu Moringa shizha poda mukugadzira kwavo.
Mapurazi edu nefekitori yeMoringa zviri kuWest Nusa Tenggara Province KuIndonesia, mamaira kure nekusangana kwemotokari uye maindasitiri anosvibisa.
Isu tinoshanda nemazana evarimi vadiki uye takagadzira Fair trade society kurima Moringa yemhando yepamusoro pasi rose mumamiriro ekunze anopisa. Tine yakazara transparent supply chain.
Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogona kurondwa kupurazi kwazvakabva. Isu tinopa yakanakisa mhando Organic Moringa zvigadzirwa zvakananga kubva kwainobva.
Kunyangwe idiki muhukuru, mashizha eMoringa ane akawanda akakosha hutano mabhenefiti. Kutaura zvazviri, masayendisiti anoidana kuti muti wemashiripiti (Muti Wezvishamiso). Mashizha eMoringa ane oval muchimiro, uye madiki muhukuru akarongwa zvakanaka padzinde, kazhinji anobikwa semuriwo wekurapwa. Tsvagiridzo pamusoro pekushanda kwemashizha eMoringa yakatangwa kubva 1980, pamashizha, kozoti bark, michero nembeu.
Sangano reWorld Health Organisation WHO rinokurudzira kuti vana nevacheche vari muucheche vazvidye, nekuda kwezvakanaka zvehuwandu hwemashizha eMoringa, ayo ane: potasium yakapetwa katatu pane mabhanana, calcium yakapetwa mana pane mukaka, kanomwe mavhitamini akawanda. C pane maranjisi, Vitamin A inopetwa nechina pane makerotsi, Kaviri mapuroteni pane mukaka.
Sangano reWHO rakatumidza muti weMoringa semuti wechishamiso, mushure mekuona zvakakosha zvemashizha eMoringa. En.wikipedia.org Zvidzidzo zvinodarika chiuru nemazana matatu, zvinyorwa nemishumo zvakatsanangura mabhenefiti eMoringa nekugona kwayo kupodza, izvo zvakakosha mukubata nekubuda kwezvirwere uye matambudziko ekushaya chikafu chinovaka muviri. Tsvagiridzo inoratidza kuti chinenge chikamu chese chechirimwa cheMoringa chine zvinhu zvakakosha, izvo zvinogona kushandiswa nenzira dzinoverengeka.
Zvakanakira Moringa mashizha.
Chinhu chakakosha chisingafaniri kukanganwa ndechekuchengetedza muviri mukuenzanisa nehuremu hwawo. Zvidzidzo zvakaitwa nenyanzvi zvakaona kuti Moringa tii inobatsira kubata nematambudziko ekugaya ayo mabhenefiti ari kumutsa metabolism yemuviri yekutsva kwecalorie.
Tii yakagadzirwa kubva kumashizha eMoringa ine yakakwira polyphenols, inoshanda se antioxidants. Zvakanakira antioxidants kuti detoxify chepfu mumuviri, uye kusimbisa immune system.
Bvisa mavara kumeso.
Izvo zviri nyore zvinongedzo, tora mashoma madiki mashizha eMoringa, pwanya kusvika yakanyatsonaka, wobva waishandisa sehupfu (kana inogonawo kusanganiswa nehupfu), iyo mune dzimwe nyika Moringa yakabviswa yakashandiswa seyakagadzirwa kugadzira zvizorwa zve. skin. Mativi echirimwa cheMoringa anoshandiswa zvakanyanya paganda makwati, mashizha, maruva nemhodzi.
Mashizha eMoringa ane zvinovaka muviri zvakaita secalcium nezvicherwa zvakaita semhangura, iron, zinc (zingi), magnesium, silica uye manganese. Mashizha eMoringa anogona zvakare kuve echisikigo moisturizer, ane mashandisiro ekubvisa akafa maseru eganda uye kuchenesa ganda.
Mashizha eMoringa ane anopfuura makumi matatu antioxidants anobatsira kune hutano hweganda. Mashizha eMoringa akapfuma muzvicherwa uye amino acids anogona kubatsira kuburitsa collagen uye protein keratin, iyo yakakosha kune hutano hwese ganda tishu mumuviri.
Kune akati wandei anozivikanwa mabhureki ezvigadzirwa zvekuzora anoshandisa Moringa oiri seyakagadziriswa zvigadzirwa zvezvigadzirwa zvavo. Kunyanya zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda senge makirimu ekuchembera, anti-wrinkle creams, aromatherapy mafuta, furo rekumeso, lotions, mafuta ekuvhenekesa uye deodorants.
Mabhenefiti echirimwa ichi cheMoringa akakosha kune hutano uye kunaka kweganda, kutanga kubva pamashizha eMoringa, mafuta eMoringa kusvika kumaruva eMoringa. Maruva eMoringa anowanzo shandiswa sezvimiro zvezvizorwa nezvinonhuhwirira, macolognes, mafuta ebvudzi, uye aromatherapy mafuta. Maruva eMoringa ane yakakwira oleic acid, yakanyatsonatswa kuita oiri. Mafuta emaruva eMoringa anogona kuvimbwa nawo kuti atore nekuchengeta kunhuhwirira.
Kushandisa Moringa mashizha kune runako.
Sei? tanga wagadzira paste yemashizha eMoringa. Sarudza mashizha eMoringa achiri akasvibira uye matsva, akaparadzaniswa nematavi. Puree mashizha eMoringa nekuwedzera mvura shoma (kuitira kuti mashizha eMoringa aite paste). Ikazoshandiswa semask, iyo Moringa mashizha paste inogona kuchengetwa kwemazuva matatu mufiriji.
Mashizha eMoringa anopa chikafu kumadzimai ari kuyamwisa nevana.
Kuvandudzwa kwemabhenefiti ezvirimwa zveMoringa muIndonesia kwanonoka zvichienzaniswa nekunze. Zvakadaro, pachine mukana wekuigadzira kuitira kugovera musika wepamba uye wekunze. Pane mukana wakakura wekuvandudza musika wemabhenefiti ezvirimwa zveMoringa mukuvandudza hutano muvanaamai vanoyamwisa nevana.
Mashizha eMoringa ane mapuroteni, iron, uye Vitamin C. Pamusoro pezvo, kune zvakare zvinhu zveflavonoid zvine mabhenefiti ekubatsira vanamai vanoyamwisa kuburitsa mukaka wakawanda wezamu. Protein yemukati inoita mukaka wemazamu wemhando yepamusoro.
Sipinachi yakakwira zvakapetwa ka25, inokurudzirwa kudyiwa nanaamai mushure mekusununguka, uko vakadzi vari kumwedzi vanowanzorasikirwa nesimbi yakawanda. Kune vana, inogona kudyiwa kubva mucheche, kureva vacheche vanopfuura mwedzi mitanhatu. Vakadzi vane pamuviri vanofanirwa kudzivirira kudya mashizha eMoringa panguva yekuzvitakura, kunyanya yekutanga trimester.
Meso ane utano.
Mashizha eMoringa ane yakakwira yevhitamini A inova yakanakira maziso. Kushandiswa kwemashizha eMoringa kunobatsira kuitira kuti nhengo dzeziso dzigare dziri mune hutano uye hwakajeka.
Mashizha eMoringa anogona kushandiswa mukurapa zvirwere zvemaziso, anogona kudyiwa zvakananga (mushure mekunge mashizha acheneswa). Mashizha eMoringa ane zvakawanda zvinovaka muviri, imwe yacho iri vhitamini A uye calcium.
Iyo vhitamini A iri mumashizha eMoringa inobatsira kuchengetedza hutano hwemaziso, kungave kuri kutanga kudzikisa njodzi yekuwedzera, minus, silinda uye cataract maziso. Mashizha eMoringa akanaka zvakare kana akadyiwa nevarwere vane chirwere cheshuga uye anobatsira pakubvisa maziso.
Antioxidant uye anti-inflammatory compounds.
Zvinoenderana neshumo rakaburitswa muAsia Pacific Journal yeCancer Prevention, mashizha eMoringa ane musanganiswa weakakosha amino acids, carotenoid phytonutrients, antioxidants senge quercetin, uye echisikigo antibacterial makomisheni anoita senge anti-inflammatory drugs.
Mashizha eMoringa ane akati wandei anti-kuchembera makomisheni anogona kuderedza mhedzisiro yeoxidative kusagadzikana uye kuzvimba. Mabhenefiti ari kuwedzera zvakanyanya nekuvapo kwepolyphenolic komisheni, vhitamini C, beta-carotene, quercetin, uye chlorogenic acid iyi makomisheni inosanganiswa nenjodzi yakaderedzwa yezvirwere zvisingaperi, senge mudumbu, mapapu, colon cancer, chirwere cheshuga, hypertension, uye chirwere chemaziso nekuda kwezvinhu zvine ngozi. age.
Chengetedza hutano hweitsvo.
Kushandiswa kwechikafu chine hutano kunongobatsira kuti itsvo dzishande zvakanaka (kushanda), zvikasadaro chikafu chisina hutano (chimwe chazvo chikafu chine mafuta akawanda) chinoungana muitsvo zvichikonzera matambudziko ehutano. Kushandiswa kwemashizha eMoringa, kunobatsira otomatiki kudzoreredza hutano hweitsvo dzatove mumamiriro ezvinhu akaipa.
Inoderedza migumisiro yekukwegura.
Chidzidzo che2014 chakaburitswa muJournal yeChikafu Sayenzi neTekinoroji yakaedza mabhenefiti eMoringa. Kuziva nezve mazinga eakakosha e-antioxidant enzymes, vaongorori vaida kuongorora kana mashizha eMoringa achigona kubatsira kuderedza mhedzisiro yekuchembera, nekushandisa echisikigo herbal antioxidants, iyo inokwanisa kudzikamisa mahomoni zvakajairika.
Chidzidzo ichi chaisanganisira makumi mapfumbamwe evakadzi vane postmenopausal pakati pemakore e45-60 makore vakakamurwa kuva mapoka matatu, avo vakapiwa maitiro akasiyana-siyana ekuwedzera. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti kuwedzeredza neMoringa uye sipinachi kwakakonzera kuwedzera kukuru kwemaoxidant compounds, ayo anoita basa rakakosha kudzikamisa mhedzisiro yekuchembera.
Kurapa rheumatism Mashizha eMoringa anogona kushandiswa kurapa rheumatism.
Kushandiswa kwemashizha eMoringa mukurapa rheumatism kuderedza marwadzo mumajoini uye kuderedza kuwanda kweuric acid mumajoini, iyo yakakosha mukukunda dambudziko rerheumatism kana gout. Mabhenefiti eiyi shizha reMoringa anogona kushandiswa rheumatism, aches, marwadzo, nezvimwe.
Kudzivirira chirwere chemoyo.
Ongororo yemhuka yemurabhoritari yakaburitswa mumagazini yaFebruary 2009 ye “Journal of Medicinal Food” yakawana kuti mashizha eMoringa anodzivirira kukuvara kwemoyo uye anopa mabhenefiti e antioxidant. Muchidzidzo ichi, kudhonzwa kwe200 milligrams pakirogiramu yehuremu hwemuviri zuva nezuva kwemazuva makumi matatu kwakakonzera kuderera kwemazinga eoxidized lipids, uye kudzivirira matishu emoyo kubva mukukuvadzwa kwechimiro. Vatsvagiri vakagumisa kuti mashizha eMoringa anopa mabhenefiti akakosha ehutano hwemoyo. Imwe tsvakiridzo ichiri kudikanwa kusimbisa zvakawanikwa izvi.
Mabhenefiti eMoringa Mashizha kuvakadzi.
Kune vakadzi, kushandiswa kwemashizha eMoringa kunogona kunge kusiri chinhu chitsva. Mashizha eMoringa anofungidzirwa kuti akanaka kuchengetedza hutano hwenhengo dzekubereka dzechikadzi. Asi zvinozoitika kuti mabhenefiti emashizha eMoringa kuvakadzi akawanda. Mabhenefiti aya anosanganisira;
Kudzivirira Anemia muvakadzi vane pamuviri.
Anemia chirwere chine njodzi kune vakadzi vane pamuviri. Nekuti huwandu hweropa mumuviri wevakadzi vane pamuviri hunodiwa kuchengetedza hutano hwavo uye hwevana vavanenge vakatakura. Mukuwedzera, anemia ine ngozi zvakare panguva yekuzvara. Kukunda njodzi yeanemia muvakadzi vane pamuviri, kushandiswa kwemashizha eMoringa kunogona kuve imwe mhinduro. Mashizha eMoringa ane kugona kuwedzera hemoglobin kuitira kuti njodzi yeanemia igone kudzivirirwa.
Kudzivirira Ngozi Yematambudziko muvakadzi vane pamuviri.
Matambudziko panguva yekuzvitakura anogona kuitika kune chero munhu. Kuti udzivise izvi, vakadzi vane pamuviri vanofanira kudya zvokudya zvine utano zvakapfuma mune zvinovaka muviri uye mavitamini. Mashizha eMoringa anogona kuve sarudzo yekudya ine hutano kuvakadzi vane pamuviri. nekuti shizha iri rine zvakawanda zvinovaka muviri uye zvicherwa zvinodiwa panguva yekuzvitakura.
Wedzera Kugadzirwa Kwemukaka Wezamu.
Mukaka waamai kana kuti mukaka waamai unodiwa nekuti kana mwana azvarwa, chikafu chikuru chinodyiwa chinobva mumukaka. Zvinosuruvarisa, havasi vakadzi vose vanogona kubudisa mukaka wezamu pakarepo mushure mekusununguka, dzimwe nguva zvinotora booster kutanga kuitira kuti mukaka ubude.
Mashizha eMoringa ane yakafanana galactogogue mhedzisiro sekatuk mashizha. Izvi zvinogona kuita kuti kugadzirwa kwemukaka wezamu kuwedzere. Nokuwanda kwomukaka wamazamu, zvinodiwa nomwana zvinovaka muviri zvinogona kuitwa.
Wedzera Antioxidants mushure mekuenda kumwedzi.
Antioxidant mazinga muvakadzi anogona chaizvo kudzikiswa nekuda kwekuderedzwa kuburitswa kwehomoni estrogen. Kuwedzera aya ma antioxidants, zvinokurudzirwa kushandisa Moringa mashizha ari muporridge. Mashizha eMoringa anotendwa kuti anowedzera antioxidants ayo akakosha kuchengetedza muviri une hutano.
Maitiro ekugadzirisa Moringa Masiya Zvakakodzera
Kuti mabhenefiti emashizha eMoringa achengetedzwe, saka iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuagadzirisa. Pane nzira dzakati wandei dzekurima nemazvo mashizha eMoringa, senge anotevera:
Yakagadzirwa mu tea.
Kugadzira Moringa mashizha nenzira iyi. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti mashizha eMoringa akaoma. Mushure meizvozvo, isa mashizha eMoringa mukapu wobva wabika senge waita tii. Iwe unogonawo kuwedzera shuga kana huchi kuti uwedzere kunaka.
Iyi nzira ndiyo nzira yakajairika. Asi nenzira iyi zvikamu zvese zvemashizha eMoringa zvinogona kushandiswa. Mvura yakabikwa inogona kunwiwa uye mashizha akabikwa anogona kushandiswa sesaladhi.
Moringa mashizha miriwo zvakare inoshanduka kuve isiri inonaka chete asiwo yakapfuma mumabhenefiti. Mashizha eMoringa anogona kugadzirwa miriwo akajeka pamwe nekuwedzera kwechibage chinotapira uye zvimwe zvinonhuhwirira zvinoita kuti kuravira kupfume.
Nhau dzakanaka! Tinogona kugadzira moringa yakapera zvigadzirwa uchishandisa yako brand / yakavanzika label moringa / chena label zvigadzirwa zveMoringa Oleifera chigadzirwa – Bata nesu kuburikidza nefoni / whatsapp: +62-877-5801-6000
Previous post: Moringa Exporter & Private Label Moringa Manufacture – Na U Batla ho iketsetsa Sehlahisoa sa Moringa?
Next post: مورنگا برآمد ڪندڙ ۽ پرائيويٽ ليبل مورنگا ٺاھيندڙ